ERDOGAN: Quluubta kala qeybsantay ee dalkiisa ma isku soo dhoweyn karaa? - Caasimada Online
Home Dunida ERDOGAN: Quluubta kala qeybsantay ee dalkiisa ma isku soo dhoweyn karaa?
ERDOGAN: Quluubta kala qeybsantay ee dalkiisa ma isku soo dhoweyn karaa?
Arrinta labaad ee la yaabka leh waxay ahayd doorashada baarlamaaniga, oo xisbiga ka tirsan bahwadaagta midigta fog ee madaxweynaha ee MHP uu helay kuraas ka badan kuwii la filayay.
Hogaamiyaha xisbigaasi oo 70 sano jir ah loona arkayay inuusan taageero wayn lahayn, oo aan wax banaanbax ah qabanin ayaa ku guuleystay in xisbigiisa uu u helo codad ku filan in la sii joogteeyo aqlabiyadda uu baarlamaanka uu ku lahaa madaxweyne Erdogan.
Waxa jiray eedeymo sheegaya inay jireen wax isdaba marrin baahsan.
Intii ay tirinta codadka socotay ayaa mucaaradku waxay ku doodeen in wakaaladda wararka ee dowladda ee Anadolu, ay ku dhawaaqeysay natiijooyin iyadoo aanba santuuqyada codadka wali la furin.
Malaayiin codad ayaan la tirinin, sida uu sheegay xisbiga CHP oo su’aal geliyay halka wakalaadda warara ee ay dowladd maamusho ay ka heleysay natiijooyinka ay baahineysay.
Warbaahiinada kale ee toos u tebin jiray natiijooyinka ayaa la xiray ama la xaraashay labadii sano ee la soo dhaafay.
Dowladda iyo wakaaladda wararka ee Anadolu, ayaa beeniyay eedeymahaasi. Erdogan ayaa uga digay mucaaradka in guuldaradooda aysan u saarinin hanaanka doorashada.
Xaqiiqadu waxay tahay in taagerayaasha Erdogan aysan sinnaba u aqbali lahayn guuldarro hadii laga guuleysan lahaa musharraxooda. Waxay u arkaan inuu yahay codkoodii. Waxay dareemayaan in xukumadihii hore ay gacan bidixeyn xoog leh ku sameeyeen.
Waxba ugama dhigna iyaga bartaTwitterka ee la xiyaray ama wariyayaal xabsiga loo taxaabay. Taa badalkeeda, waxaa iyaga wax weyn uga dhigan buundooyinka , garoomada diyaaradaha, iskuullada iyo isbitaaalada uu Erdogan dhisay oo noloshooda wax wayn ka badalay.
Dadka isaga dhaliishan ayaase u arka in hadallada qalafsan ee hogaamiyahooda ay sii fogeyneysa riyadoodii ahayd inay ku biiraan Midowga Yurub.
Dadka dhaliishan Erdogan ayaanse wali rajo beelin. Inkastoo 90% warbaahinta ay taabacsan tahay dowladda, doorashadana la qabtay iyadoo dalka uu ku jira xaalad deg deg ah, mucaardka iyo aqoonyannho badana dibad joog laga dhigay, iyadoo ay sida atahay waxay guul u arkaan in madaxweynaha uu taageero ka helay 50% shacabka dalkaasi.
“Waxaan ku hoos nool nahay xukumad fashiist ah,” ayuu yiri Selin Sayek Boke oo ah xildhibaan ka tirsan mucaaradka.
“Balse xukumadaha fashiist inta badan guusha doorashadooda ma ahan 53% ee waa 90% iyo ka badan. Marka waxay tani ku tuseysaa in xoogagga isbadal doonka ah ay wali jiraan.”
Balse hadda Erdogan waxa uu ku naaloonayaa awoodaha ballaaran ee uu ka helay dastuurka cusub ee la meel mariyay sanadkii la soo dhaafay. Waxaa ka mid ah inuu soo xuli kara wasiirada iyo garsoorayaasha. Waxay taasi ka dhigeysaa inuu yahay hogaamiyihii ugu awoodda badnaa dalkaasi tan iyo xukunkii aabihii aasaasay Turkiga ee Ataturk.
Rajadiisu hadda waxay tahay inuu sii maamulo dalkan tan iyo sanadda 2023, 100 sano ka dib markii la alkumay. Mucaaradkana waxay u tahay fursad ay boorka isaga jafaan oo ay ka shaqeeyaan qorshe kale iyo sidii ay doorashada xigta ugu guuleysan lahaayeen Erdogan.